ကောင်းကင်ကို: မိဘမကောင်း သားသမီးခေါင်း
ကဗျာ အဟောင်းလေးပါ။ ကျွန်တော့် အစ်ကိုလို ခင်ရတဲ့ သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်က မိဘဆရာကန်တော့ပွဲမှာ မိဘနေရာကနေ စကားပြောရမှာကို ဒီကဗျာ ထရွတ်လို့ကျွန်တော် မျက်နှာပူခဲ့ရစေခဲ့တဲ့ ကဗျာလေးပေါ့။
အတ္တနဲ့ တစ်ဘက်ချို့နေတဲ့ မျက်လုံး
ဥာဏ်နီဥာဏ်နက်တွေ ထည့်ထားတဲ့ ဦးနှောက်
(ပုံက အေပီ ကနေ ယူထားတာပါ။)
Posted by Kaung Kin Ko at 1:12 PM
ညီရေ့ အကိုတို့ကရော ဘာပြောပြနိုင်ဦးတော့မည်နည်း... ၀မ်းနည်းတယ်... ဒါပဲ ပြောတတ်တော့တယ်...
အတူတူပါပဲ အစ်ကိုရာ။ ကျွန်တော်တို့ လည်း ကျောင်းသား ဘ၀ကို ဖြတ်ခဲ့ပြီး တာဝန်မကျေခဲ့တော့ အခုလူငယ်ကျောင်းသားလေးတွေ ကျွန်တော်တို့ ကို လက်ညှိုးထိုးပြရင် ၀မ်းနည်းပြီးလက်ပိုက်ကြည့်နေရုံပဲ တတ်နိုင်တော့တယ်ဗျာ။ အစ်ကိုကမှ လုပ်ခဲ့သူဆိုတော့ တစ်ဦးချင်း အနေနဲ့ ဖြေသာသေးတယ်ဗျ။
ဖြစ်နိုင်ရင် နောင်မျိုးဆက်အတွက် အမွေဆိုးတွေ မခံစားစေခြင်တော့ဘူးဗျာ ကဗျာ အရမ်းကောင်းတယ်
အင်း..အစ်ကို ဘာဆုရလဲ ပြောရဦးမယ်နော်
အမေတွေရဲ့ အထုပ၌တ္တိ ဒေါင်းလုပ်လို့မရဘူး
အစ်ဆို့ဆီမှာ ရှိရင် pdf ပို့ပေးပါလားအစ်ကကို...
ကျွန်တော့်ရဲ့ အိမ်သာကျင်းကို လာကြည့်ပေးဥိးဗျ..
အမှန်တရားတွေမှန်းသိတယ် နောင်မျိုးဆက်တွေ အတွက်လည်း ရင်လေးမိတယ် သို့သော်.. အုတ်နံရံကို ဘဲဥနဲ့ပေါက်ကြရလွန်းလို့ ကွဲခဲ့ရတဲ့ အလုံးပေါင်းလည်း မနည်းခဲ့တော့ဘူး ကျနော်လည်း အကွဲမခံရဲတဲ့ ငကြောက်ဘဲဥလေးပေါ့း) ကဗျာကောင်းလေး အတွက် ကျေးဇူးပါ ကိုကောင်းကင် ။
tutu: ဒီလောက်ကောင်းပြီး အဓိပ္ပာယ်ပြည့်ဝတဲ့ ကဗျာအတွက် ရှင်းလင်းချက်မလိုပါဘူး မောင်လေးရာ ... ဘာကိုပြောချင်တယ်ဆိုတာ ရှင်းလွန်းလို့ ဒီကဗျာဖတ်ပြီးမွန်းကြပ်မိပါရဲ့ ... တစ်နေရာယူ ......... ငါးနေရာလု ဆိုတဲ့အကြောင်းလေးကို အကြိုက်ဆုံးပဲ။ တကယ်ဆို ရှင်းလင်းချက်ရဲ့ ဆရာကန်တော့ပွဲမှာသူငယ်ချင်းထရွတ်လို့ မျက်နှာပူဖူးတယ် ဆိုတာမှာတင် ရပ်လိုက်လို့ရတယ် ... အစ်မအမြင်ပါ။
ကဗျာ နဲ့ အစာခြေ ပြီး တိုးတိုးတိတ်တိတ် အိမ်ပြန်သွားတယ် ၊၊ ကောင်းသောနေ့ပါ ကောင်းကင်ကြီး ၊၊
ကဗျာဆရာရေ… ဟိုအရင်တခါ ဖတ်တုန်းက ကိုယ်က သားသမီးနေရာမှာလို ပူးဝင်ခံစား ဖတ်ကြည့်ခဲ့တာ… ခုတော့ နိဒါန်းက သတိပေးတာကြောင့်.. အင်း…. ကိုယ့်ကိုယ်ကို ရှက်တယ်….
ခင်ဗျားတို့ က တစ်…နေရာယူ၊ နှစ်…နေရာယူ၊ သုံး ….နေရာယူ၊ လေး…နေရာယ၊ူ ငါး….နေရာလု တဲ့
ကျွန်မ ယုံကြည်ရင်း စောင့်နေတယ် အကို ..
သစ်တုံးကြီးတခုကို နှစ်ယောက်အတူ ထမ်းလာတဲ့--
သစ်ခွဲစက်မှာ သွားခွဲမလို့ ---ဖြေတယ်--
ကဗျာဆရာကတော့--အိမ် တလုံးဆောက်တဲ့ နေရာမှာ--
ဒီကဗျာက ပိုကောင်းနေပါတယ်။ ဖွင့်ဆိုချက်လေး ဖြုတ်လိုက်ရင် ပိုတွေးလို့ ကောင်းသွားမှာပါ။ စာဖတ်သူကို လေးစားလို့ ကျေးဇူးလည်း တင်ပါတယ်။ ဆက်လက်အားပေးနေပါမယ်။
You are the best poet,,,,,,,,,,,,,